Stability Shares စျေး - အွန်လိုင်း XSI ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Stability Shares (XSI)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Stability Shares (XSI) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Stability Shares ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Stability Shares တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Stability Shares များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Stability SharesXSI သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.234Stability SharesXSI သို့ ယူရိုEUR€0.199Stability SharesXSI သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.179Stability SharesXSI သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.214Stability SharesXSI သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr2.12Stability SharesXSI သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.48Stability SharesXSI သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč5.22Stability SharesXSI သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.876Stability SharesXSI သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.313Stability SharesXSI သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.327Stability SharesXSI သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$5.24Stability SharesXSI သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.81Stability SharesXSI သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$1.27Stability SharesXSI သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹17.54Stability SharesXSI သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.39.44Stability SharesXSI သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.321Stability SharesXSI သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.355Stability SharesXSI သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿7.3Stability SharesXSI သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.63Stability SharesXSI သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥24.76Stability SharesXSI သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩278.04Stability SharesXSI သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦89.8Stability SharesXSI သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽17.24Stability SharesXSI သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴6.48
Stability SharesXSI သို့ BitcoinBTC0.00002 Stability SharesXSI သို့ EthereumETH0.000601 Stability SharesXSI သို့ LitecoinLTC0.00411 Stability SharesXSI သို့ DigitalCashDASH0.00238 Stability SharesXSI သို့ MoneroXMR0.00251 Stability SharesXSI သို့ NxtNXT17.24 Stability SharesXSI သို့ Ethereum ClassicETC0.0338 Stability SharesXSI သို့ DogecoinDOGE68.97 Stability SharesXSI သို့ ZCashZEC0.00253 Stability SharesXSI သို့ BitsharesBTS8.93 Stability SharesXSI သို့ DigiByteDGB8.02 Stability SharesXSI သို့ RippleXRP0.809 Stability SharesXSI သို့ BitcoinDarkBTCD0.00796 Stability SharesXSI သို့ PeerCoinPPC0.762 Stability SharesXSI သို့ CraigsCoinCRAIG105.27 Stability SharesXSI သို့ BitstakeXBS9.85 Stability SharesXSI သို့ PayCoinXPY4.03 Stability SharesXSI သို့ ProsperCoinPRC28.99 Stability SharesXSI သို့ YbCoinYBC0.000124 Stability SharesXSI သို့ DarkKushDANK74.08 Stability SharesXSI သို့ GiveCoinGIVE500.03 Stability SharesXSI သို့ KoboCoinKOBO52.49 Stability SharesXSI သို့ DarkTokenDT0.215 Stability SharesXSI သို့ CETUS CoinCETI666.71